Musqusha Baahsan ee Qubayska Qubayska leh Pop Up Drain Matte
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / WOWOW 2 Qabsada 8 inch Fidsan Musqusha Qulqulka Musqusha oo Fidsan Matte Matte Black Basin Qasabadaha Mashiinka Mashiinka
Faa'iidooyinka qasabadda musqusha ee baahsan oo kooban:
KHUDBADDA FANAANADA HORE- Jirka ugu muhiimsan iyo isku xiraha qasabada madow waxay ka samaysan yihiin naxaas adag, culus oo waara. Midab u dhigma ururinta bullaacadda pop-up iyo tubooyinka cUPC ee la ansaxiyay ayaa lagu daray.
FARSAMADA XIRIIRKA XIRIIRKA EE ABUURKA- Qaab dhismeedka tuubada isku xidhka degdega ah ee “Y” ee u gaarka ah waa fududahay in la rakibo isla markaana keydiya khidmadda tuubooyinka
Matte MADOW FINISH- Fure-hoose oo ku jira dhammaystir madow oo saafi ah, naqshad nabar sare oo u gaar ah abuurista qaab qurxin musqusha oo casri ah. WOWOW waxay ku darsataa lakab daboolka dhalaalaya dusha sare ee madow kaas oo iska caabin kara sumcadda iyo daxalka isticmaalka maalinlaha ah.
360 DEGREE SWUCEL FASHET- Gacan labajibaaran, 3 qaybood oo naqshad ah ayaa ku habboon xakamaynta heerkulka biyaha. 3-god Mount oo leh 8-inch naqshad ballaadhan, masaafada ayaa lagu hagaajin karaa shuruudahaaga dhabta ah.
damaanad KAALMADA MUHIIMKA AH - Dammaanad-5-sano iyo taageero macmiil ayaa la siiyaa. Waxaa daboolaya soo noqoshada 90-maalmood. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Matte Black, oo ah mid aan dhiman karin, waana isbeddellada aan gadaal ka dhicin. Maqaallada guriga, madow had iyo jeer waa heer sare oo deggan. Sababtoo ah caan ahaanta qaabka ugu yar, waxay ku riixday madow carshiga midabada caadiga ah. WOWOW qasabad, waxay kaa caawineysaa inaad abuurto nolol cusub…
Tuunbo Waajibaad Culus
Body Jirka qasabadu wuxuu ka samaysan yahay naxaas adag iyo naxaas
Maaddada tayada sare leh waxay hubisaa jiritaanka qasabadda
Fast Soonka hal abuurka asalka ah wuxuu isku xiraa dhismaha
● Way fududahay inaad kaligaa rakibto adigoon tuubiste
Aidarro Xaraash ah
O Neoperl ABS Biiyaha
Nadiifintu way ka sahlan tahay
● Waa lagaa saari karaa nadiifinta qalab la'aan
U cPC Ruqsado
Qiyaasta US 3/8 inji tubbada biyaha
S NSF 61 (Cabitaanka Saameynta Caafimaadka Biyaha)
Ku ilaali caafimaadkaaga iyo kan qoyskaaga
Wuxuu la yimaadaa midab isku mid ah
● La cusbooneysiiyay Soosaara Qulqulka Bullaacadda oo leh dalool qulqulaya
Ka fududahay rakibidda marka loo eego bullaacadda wiishka dhaqameed
Bacda maxaa ku jira
X 1 x qasabada qasabada musqusha madow
1 Qalabka qalabka; 1 x soo baxa bullaacad madow; 1 x Y qaab isku xir dhakhso leh
X 2x 60 cm cUPC tuubooyinka biyaha
SKU: 2320500B Categories: Qasabadaha Musqusha oo Fidsan, Qubeyska Musqusha Tags: saxanka qasabadda weelka, Fidsan
Deck Mount ballaaran